Saraakiil ka tirsan ciidanka xooga ee ku sugan gobolka ayaa u sheegay xafiiska warqabadka Garowe Online ee Muqdisho in weerarka cirka ah lagu beegsaday goobo ay ku dhumaaleystaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Ma cada khasaaraha ka dhashay duqaynta, inkastoo mas'uuliyiinta gobolka ay tibaaxeen inay wadaan qiimayn ku aadan waxyaaladda dhabta ah oo ay geysatay duqaynta oo ay fuliyeen diyaarado joog hoose ku duulaya.
Duqayntaan ayaa waxay imaaneysaa xili dhowaan Mareykanka uu shaaciyey inuu kordhinayo weerarada cirka ah ee uu ka fulinayo Soomaaliya, kuwaasoo uu ku beegsanayo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Weeraro badan oo diyaarado fuliyeen ayaa sanadihii lasoo dhaafey ka dhacay qeybo kamid ah Soomaaliya, oo ay kamid tahay Puntland, halkaasoo Mareykanka kuu beegsaday koox xiriir la leh Daacish.
Duqayntaan xalay ka dhacday degaano Galbeedka uga beegan Magaaladda Jowhar ayaa kusoo beegmaysa xili degaano iyo degmooyin ka tirsan dalka ay ka socdaan Guluf ka dhan xoogaga xiriirka la leh Al-Qaacidda, ee Al-Shabaab.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa fariin kaloo culus u diray madaxda dowlad goboleedyada xilli uu khilaaf jiro...
Sarkaal ciidanka Soomaaliya katirsan oo ku dhintay shil gaari [Magaca]
Soomaliya 13.09.2018. 21:00
DEG DEG: In ka badan 10 Wasiir oo iska casilay Maamulka HirShabelle
Soomaliya 13.08.2017. 13:45